Foll နောက်လိုက်များကိုဝယ်ပါ Creapublicidadonline 🥇
အထင်ကြီး + ကြိုက်နှစ်သက်သည်
အပြုသဘော / အပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက်ကိုဝယ်ပါ
Fanpage အတွက် Likes ကိုဝယ်ပါ
ထုတ်ဝေမှုအတွက် Likes ကိုဝယ်ပါ
ကြယ် ၅ ပွင့်အဆင့်ဝယ်မည်
Likes / မကြိုက်ဘူးဝယ်ပါ
မျှဝေ / အစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူပါ
Retweets / Likes ဝယ်ပါ
Auto Retweets / Likes ကိုဝယ်ပါ
အခမဲ့ SEO ဆန်းစစ်ခြင်း
နောက်လိုက်များကိုဝယ်ယူခြင်းသည် ပို၍ လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။
LIKES / YOUTUBE မကြိုက်ဘူး
TWITTER LIKA RETWEETS
အကြိုက်များ + အလိုအလျှောက် Instagram Views
တန်ဖိုး 4.21 က de 5
ကတည်းက 19,99€ / လ
Likes Instagram ကိုဝယ်ပါ
တန်ဖိုး 4.68 က de 5
Instagram ကို Auto- နောက်လိုက်
တန်ဖိုး 4.67 က de 5
ကတည်းက 2,99€ 1 ပတ်အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့်အတူ / ရက်သတ္တပတ်
LinkedIn နောက်လိုက် Buy
တန်ဖိုး 4.75 က de 5
Youtube Likes / မနှစ်သက်ရာကိုဝယ်ပါ
တန်ဖိုး 5.00 က de 5
Instagram Views ဝယ်ပါ
တန်ဖိုး 4.50 က de 5
နောက်လိုက်က Facebook ကိုဝယ်
၀ ယ်ယူရန်စိတ်မပူပါနဲ့အပတ်တိုင်းနောက်လိုက်များကိုရယူပါ တစ်ပါတ်အတွက်အခမဲ့ကြိုးစားပါ!
ကုန်ပစ္စည်းသည်မယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်း၊ အချိန်ကန့်သတ်မှုလျှော့စျေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချခြင်း။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ?
0,79 မှ Instagram နောက်လိုက်များကိုဝယ်ပါ€
Instagram Auto နောက်လိုက်များ
နောက်လိုက်များနှင့်အကြိုက်များကိုသင်၏ Fanpage အတွက်ဝယ်ယူပါ ၃.၄၉ မှ€
Instagram နောက်လိုက်များကို ၀ ယ်ခြင်းသည်သူတို့၏အကောင့်ကိုလျင်မြန်စွာတိုးတက်လိုသောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာနောက်လိုက်များများပြားသော profiles များသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စာပေများကိုရှာဖွေရာတွင်နောက်လိုက်ဖြစ်လာမည့်အခြားသူများ၏အာရုံကိုပိုမိုဆွဲဆောင်လေ့ရှိသည်။
YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည် youtubers များ၊ စျေးကွက်အတွင်းအဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အကျော်ကြားဆုံးသောသူများကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတာဝန်ခံများအကြားတွင်အလွန်အသုံးများသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့အားတက်ကြွသောနောက်လိုက်များစွာရရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးအရကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်၏တောင်းဆိုချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်ကိုလျှော့ချသည်
အသုံးပြုသူမှအလွဲသုံးစားမှုမရှိသလောက်ငွေပေးချေမှုရရှိပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၃၀ ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအစားထိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများမှပေးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရန်ကတိပေးသည်။ သင်၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဒေတာစာဝှက်စနစ် (SSL) ရှိသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားမြန်ဆန်စွာ၊ ကျွမ်းကျင်ပြီးအရည်အသွေးပြည့်ဝသောအထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။ မည်သည့်မေးခွန်းများအတွက်မဆိုသင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သင့်ထံတွင်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်သံသယကိုမဆိုအများဆုံး ၂၄ နာရီအတွင်းဖြေရှင်းနိုင်ပါမည်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်၊ Paypal နှင့်ဘဏ်တို့ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ ယခုငါတို့ BitCoin နှင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံ။
အရည်အသွေးမြင့်ပြီးမြန်ဆန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ပံ့ပိုးသူအားကြာမြင့်စွာရှာဖွေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အကြံဥာဏ်များကြောင့် Creapublicidadonline.com ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ နောက်လိုက်များဝယ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကောင်းတဲ့အလုပ်။
HR ဖြေရှင်းချက်, Espana
ငါ Instagram ကိုနောက်လိုက်တွေကို ၀ ယ်လိုက်ပြီ။ လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာကျော်ကြားမှုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကြောင့်အခုသူတို့ကငါ့ကိုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ခေါ်လာကြတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များ၊
ယနေ့လူမှုကွန်ယက်များ၌ရှိနေခြင်းသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်နေရာရလိုသူများအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ လူမှုရေးကွန်ယက်များသည်သုံးစွဲသူများသည် Google search engine နှင့်အတူပိုမိုရွေ့လျားစေသောကြော်ငြာလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောအားသာချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤပလက်ဖောင်းများကိုကြော်ငြာခြင်းသည်ယုတ္တိရှိပုံရသည်။
၀ က်ဘ်သည်လူတိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောကြောင့်အပြိုင်အဆိုင်များပြားခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူအသစ်သည်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ ၀ ယ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဆိုသောအခါများသောအားဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏လူမှုကွန်ယက်များတွင်၎င်းတို့တွင်ရှိနေခြင်းရှိမရှိသိရန်နှင့် ထို့ကြောင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကြိုးစားပြီးသောအခြားသူများ၏ထင်မြင်ချက်ကိုသိရှိပါ။ သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်ချက်မှာအမြဲတမ်းရေတွက်သည်။
ကုမ္ပဏီ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (သို့) ပေါ်ထွက်လာတဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒါကလုံးဝလက်ခံတယ် နောက်လိုက်မဝယ် သို့မဟုတ်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်သင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးပွားစေမည့်အချို့ဝန်ဆောင်မှုများ။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများမှာဥပမာ - နောက်လိုက်များ၊ အကြိုက်များ၊ သင်၏ဗီဒီယိုများအတွက်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်းများ၊ အပြုသဘောဆောင်သောမှတ်ချက်များ ... သို့သော်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးအတွက်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်အသုံးချလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်စေမည့်မဟာဗျူဟာများကိုအသုံးပြုရမည်။ ဤနေရာတွင်၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကိုချန်ထားသော်လည်းသင်ဖန်တီးနိုင်သောနည်းစနစ်များစွာရှိသည်။ ဖန်တီးမှုကိုရယူပြီးသင်၏အိတ်ကပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်မရောက်မချင်းမတူညီသောနည်းလမ်းများကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါ
အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သုံးစွဲသူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။ လူမှုကွန်ယက်များတွင်ကြီးမားစွာရှိနေခြင်းသည်အကောင့်၏တိုးတက်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တကယ့်အသုံးပြုသူများသည်နောက်လိုက်များစွာ၏အကောင့်များကိုလိုက်နာလေ့ရှိသည်။
သင်နောက်လိုက်လိုက်သူအမြောက်အများသည်သင့်နောက်သို့လိုက်လာခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ မဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူအမြောက်အများကိုနေ့စဉ်လိုက်နာရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
နောက်လိုက်များ၊ မှတ်ချက်များ၊ အကြိုက်များ၊ ပြန်လည်စုဆောင်းခြင်းများ ... သည်များစွာသောလူမှုရေးကွန်ရက်များကကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုနေရာချရန်နှင့်၎င်းကိုလမ်းကြောင်း (သို့) သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအဖြစ်ပြသရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုစိတ် ၀ င်စားသောစစ်မှန်သောအသုံးပြုသူများစွာထံရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုမျှတပြီးသဘာဝကျသောနည်းဖြင့်အမြဲတမ်းအသုံးပြုပါ။ (ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုတွင်နောက်လိုက် ၅၀,၀၀၀ နှင့်နှစ်သက်မှု ၃ ခုရှိသည်။ သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖြင့်လည်ပတ်မှု ၁ သန်းနှင့်အကြိုက် ၂၀ ပါ ၀ င်သည်မှာသဘာဝမဟုတ်ပါ) ။
နေ့စဉ်နှင့်အမျှအကြိမ်ရာပေါင်းများစွာကြိုက်နှစ်သက်မှုများ၊ လှုပ်ရှားမှုများသို့ခေါ်ဆိုမှုများပါသောသီးသန့်စာတိုများကိုပေးပို့ရန်သင်၏အကောင့်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်အကြိုက်များကိုမြင်ပြီးနောက်သင်၏ပရိုဖိုင်းသို့စိတ်ဝင်စားလာလိမ့်မည်။
ယခုလက်ရှိတွင်ရာနှင့်ချီ။ ကျွမ်းကျင်သောကိုယ်ရေးအချက်အလက်လိုအပ်သောအလုပ်များရာနှင့်ချီရှိသည် လူမှုရေးကွန်ရက်များ, ဘယ်မှာလဲ ရပါတယ် ထောင်ပေါင်းများစွာ နောက်လိုက် အချိန်တိုအတွင်းမှာပင် start-ups များစွာအတွက်အရေးကြီးသည်။
ထွန်းသစ်စအကောင့်များတွင် နောက်လိုက်မဝယ် သို့မဟုတ်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားသည်ကျွန်ုပ်တို့အားထိုကဲ့သို့သောနည်းဗျူဟာများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်၊ အချို့လူမှုရေးကွန်ယက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်လိုက်များပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလှုပ်ရှားမှုကန့်သတ်သောကြောင့်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဥပမာများစွာရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်နောက်လိုက်အနည်းငယ်ရှိလျှင်“ နောက်သို့ပြန်” ကိုမှန်ကန်စွာ သုံး၍ မရပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နောက်လိုက်များနောက်လိုက်ခြင်းအချိုးမညီမျှမှုအပြင်နေ့စဉ်အသုံးပြုသူများကိုလိုက်နာလိုသည့်အခါလူမှုကွန်ယက်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအစကတည်းကနောက်လိုက်အမြောက်အမြားလိုအပ်တယ်။
အောက်ပါနောက်လိုက်အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားသလိုပဲ (လိမ်လည်မှုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုထဲမကျရောက်ဘဲ) တစ်နေ့တာအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့နိုင်တဲ့သီးသန့်စာတိုများသို့မဟုတ်နှစ်သက်မှုများလည်းကန့်သတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်များများလေလေ၊ တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျများပိုပိုများလေလေ၊
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, နောက်လိုက်မဝယ် ၎င်းသည်အပိုတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုကွန်ယက်၏သက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်လိုပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုးတက်မှုဖြစ်စေမည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်လိုက်များနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်မှုစသည်တို့ကိုမဖယ်ထုတ်နိုင်ပါ။
GIF ကို Instagram မှာဘယ်လိုတင်မလဲ
မေလ 10, 2021 | Instagram ကို
Instagram သည်လူမှုရေးကွန်ရက်များအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သောပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပေါင်းစည်းမှုများကိုပေးသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုသောသုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်နောက်လိုက်များအားဖော်ပြရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဘို့...
မေလ 10, 2021 | တွစ်တာ
Twitter အတည်ပြုချက်သည်တွစ်တာအပလီကေးရှင်းမှသုံးစွဲသူများတောင်းဆိုသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ရန်ရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ယနေ့ရှာတွေ့နိုင်သည့်အဓိကလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်...
လူမှုကွန်ယက်ရှိတွစ်တာများကိုတွစ်တာတွင်သက်တမ်းတိုတောင်းသည်ဟုဆိုနိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည်အလျင်အမြန်ဖျက်ပစ်လိုက်သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲသူတို့ထုတ်ဝေသောကြောင့်သုံးစွဲသူများအတွက်၎င်းသည်သူတို့၏နံရံတွင်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည် ...
သင်၏ Zoom အကောင့်နှင့်အခြားအက်ပ်များကိုပိတ်ရန်
ပြီ 30, 2021 | App များ
လူမှုကွန်ယက်များ၊ အထူးသဖြင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရောက်ရှိပြီးချိန် မှစ၍ လူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာသူတို့မှတစ်ဆင့်အခြားလူများနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများ၊ အသိမိတ်ဆွေများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ၌ Tinder ရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း
အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်လာပြီး Tinder သည်ယနေ့စင်မြင့်တွင် ဦး ဆောင်နေသည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူအမြောက်အများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော application များနှင့်အတူ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အမြတ်အစွန်းတွင် ဦး ဆောင်သူအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သည်။
WhatsApp ကို Clone လုပ်နည်း
WhatsApp ကိုမည်သို့ပုံတူကူးယူရမည်ကိုစိတ်ဝင်စားရန်စိတ် ၀ င်စားသူများစွာရှိပါသည်။ သို့ပါ၍ ၎င်းတို့သည်တစ်ခြားသောကိရိယာနှစ်ခုတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၎င်းမှာပြင်ပ application တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ အသုံးပြုခြင်းအထိရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံရှိစေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ သင်ဆက်လက်လှည့်လည်ကြည့်ရှုပါကအထက်ဖော်ပြပါ cookies များကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ခံခြင်းအတွက်သင်သဘောတူခွင့်ပြုသည် cookies များကိုမူဝါဒက